Indlela Vula bootloader kudivayisi Android
Bootloader isiqeshana ikhodi okutshela yesistimu yokusebenza kudivayisi yakho ye-Android kanjani ukuba ivuleke. Ivame ikhiyiwe ngoba nomkhiqizi wakho ufuna kuyokushukumisela ekubeni unamathele enguqulweni yawo Android OS, okuyinto lenzelwa kudivayisi yakho. Nge bootloader ikhiyiwe, wena ayikwazi ukwenza ngendlela oyifisayo deice yakho (isb. flash a ROM ngokwezifiso).
Shaja ibhethri ubuncane 30%.
Yenza isipele idivayisi yakho.
Into ebaluleke kakhulu: Android SDK kumele afakwe kukhompyutha yakho.
Vula bootloader yakho
Isixwayiso: Ivula bootloader voids iwaranti yakho ingasebenzi. Iphinde abesesula ngokuphelele (ifomethi) izicelo zangaphakathi inkumbulo kuhlanganise ifoni yakho ye-Android, othintana, imiyalezo, izithombe nokunye.
1. Vumela kwe-USB kungasebenzi kudivayisi yakho. (Qondisa lapha)
2. Xhuma idivayisi yakho kwikhompyutha yakho nge-ikhebula le-USB. Uma okokuqala ukwenza kanjalo, uzothola pop-up ecela imvume.
3. Vula esibulalayo kukhompyutha yakho (cindezela Win R, thayipha cmd bese ushaya u-Enter), Ukushintsha ifolda Ipulatifomu Amathuluzi e-Android SDK. ngokuvamile, ke elibukeka njenga leli, kodwa une ukuthola indlela ngqo lapho efakwe i-Android SDK kukhompyutha yakho:
C:/Android SDK / ADT-bundle ye-amafasitela-x86_64-20131030 / sdk / inkundla-amathuluzi /
Ukuze ushintshe indlela ifolda, udinga ukubeka "cd" phambi kwalo, ngakho yonke umyalo ibukeke ngakho:
cd C:/Android SDK / ADT-bundle ye-amafasitela-x86_64-20131030 / sdk / inkundla-amathuluzi /
4. Khona-ke sicela uthayiphe umugqa kokulalela umyalo ukuba ivuleke idivayisi fastboot Imodi:
adb qala kabusha bootloader
5. Uma idivayisi yakho fastboot Imodi, thayipha elandelayo umugqa wemiyalo:
6. Manje ungabona idivayisi inombolo yakho ye-serial. Uma ungaboni inombolo yakho ye-serial, futhi esikhundleni ukubona “<elinde kudivayisi>”, ukufaka “Android SDK.
7. Bese uthayipha okulandelayo umugqa wemiyalo bese ucindezela Enter:
fastboot yokuvula oem
8. A nesinqindi izoveza kudivayisi yakho ukuthi kufanele yamukelwe. Sebenzisa amakhi evolumu ukhethe “Yebo”, bese ucindezela inkinobho amandla ukuqinisekisa Ukukhetha.
9. Uma idivayisi akusho ngokuzenzakalelayo iqalise, ukuqalisa phansi usuka kumenyu.
Siyakuhalalisela, wena idivayisi manje ivuliwe.
Njengoba i-Android kuyinto ovulekile OS kanti uyatholakala kwi-hardware eziningi ezahlukene, zonke umakhi has version yabo bootloader. Abaningi babo ukunikeza izindlela ukukusiza ukuvula bootloader kuwebhusayithi yabo.
Samsung Uhlelo yokuvula bootloader
ikhasi HTC yokuvula bootloader
Sony sika uvula imiyalelo bootloader.
Abanye abakhiqizi futhi abathwali ungavumeli bootloader nokuvula, kodwa ungakwazi ngokuvamile ukuthola indlela emhlabeni ukuthi Xda Onjiniyela Forum.
Indlela impande Google Nexus 5 e One Click
Indlela baqede ifoni yakho Android ne-tablet
Ingabe Likhona Izingozi baqede An Kudivayisi Android
Ngenzenjani bazuzani ukhula lwenkohlakalo egcwele
Yini eyenza “Umsuka A Ucingo” Ukuthini
Posted on July 4, 2015 Agasti 26, 2015 Umbhali WillIzigaba Umsuka Amadivayisi AndroidAmathegi impande android, ukuvula bootloader
Langaphambilini post Previous: Izinto Esingabonisa Ngazo Ukuthi Battery Iphesenti ku-iPhone & iPad
Next post Next: Yini eyenza “Umsuka A Ucingo” Ukuthini